Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! युवाहरू पार्टी नेतृत्वमा पुग्न परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ [अन्तर्वार्ता]
युवाहरू पार्टी नेतृत्वमा पुग्न परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ [अन्तर्वार्ता]
ग्लोबल संवाददाता बुधबार, असार २३, २०७८
नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति पदका लागी केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वमा युवा पुग्नुपर्छ भन्नेमध्येका एक जना युवा नेता गुरुङले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसलाई आगामी आम निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी बनाउने र सरकार गठन गरेर देशमा समृद्धिको नेतृत्व गर्न सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन् ।
नेता गुरुङलाई पार्टीमा राजनीतिक अवसर न्यायोचित, समानुपातिक र समावेशी ढंगले वितरण नभएको पनि लागेको छ । यस्ता अवसरको वितरण पार्टीमा निरन्तरता, योगदान र योग्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । परम्परागत कांग्रेसका समूहहरूलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनपछि निमिट्यान्न पार्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू पनि पुग्नुपर्छ र पुग्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिने चाहना रहेको बताउने गुरुङसँग गरिएको कुराकानी ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा तपाईं पनि सभापति पदमा आकाङ्क्षी हुनुको कारण ?
नेपाली कांग्रेसमा लाखौं मानिस आबद्ध छन्। कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार र नीतिमा आकर्षित भएर उहाँहरूको कांग्रेससँग आबद्धता हो। तर, कांग्रेसमा लागेका मानिसहरूले राजनीतिक न्याय पाउनुपर्छ। अझ बढी राजनीतिक सुरक्षा पाउनुपर्छ। राजनीतिक अवसरहरू प्राप्त गर्नुपर्छ र राजनीतिमा लागेका आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायोचित ढंगले समान अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ।
देशभरिका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको आवाज हो यो। प्रखररूपमा यो आवाज उठान भइरहेको छ। तर, अवसर प्राप्तिको दृष्टिले हेर्दा कसैले पाएको पाएकै र कसैले जीवनभर कांग्रेसको संगठक हुँदा पनि पाउने स्थिति छैन।
त्यही भएर सभापति पदमा मेरो उम्मेदवारी कांग्रेसीहरूलाई राजनीतिक अवसर न्यायोचित ढंगले प्रदान गर्नका लागि हो। कांग्रेसलाई आगामी आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउँदै सरकार गठन गरेर देशमा विकासको नेतृत्व पनि गर्न मेरो उम्मेदवारी हो।
के अहिले राजनीतिक अवसर न्यायोचित ढंगले वितरण छैन कांग्रेसमा ?
अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै यस्तो छ। कांग्रेसमा लाग्दा कसैले अवसर पाएको पाएकै छन् त कसैले कुनै अवसर प्राप्त नगर्ने गरिको स्थिति छ। विभेद छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक अवसरको न्यायोचित वितरण भइरहेको छैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा लागेवापत मानिसहरूले राजनीतिक न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ र, राजनीति अवसरको न्यायोचितसँगै समान वितरण पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो।
त्यसो भएको अवस्थामा मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ,–‘नेपाली कांग्रेसमा लागेपछि अवसर प्राप्त हुन सक्छ, मेरो पालो आउँछ, नेपाली कांग्रेसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुँदैन।’
यो आत्मविश्वास बढेर जान्छ। तर, अहिले कांग्रेसमा आफ्नालाई राजनीतिक अवसर फालाफाल कसैलाई अनिकाल छ। यस्तो हुनुहुँदैन। आम कार्यकर्ताको माग यही छ। त्यही मागअनुसार मेरो सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा हो।
मतलव, योगदानमा आधारित राजनीतिक अवसर हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईंको जोड हो?
हो। योगदानमा आधारित तर न्यायोचित अवसर हुनुपर्छ। त्यो फेरि समानुपातिक समावेशी आधारमा वितरण हुनुपर्छ। कुनै पनि कांग्रेसीलाई राजनीतिक अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। सबैको हक छ। सबैको पार्टीमा लगानी छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण पनि पार्टीमा निरन्तरता, योगदान र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ।
अर्को, सामान्य मानिसले पनि मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ। परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ र सामान्य मानिसले पनि पार्टी संगठनको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसैले अबको नेतृत्व सामान्य मानिसबाटै हुन्छ। हिजो अवसर पाइरहेका, हिजो सुविधा भोगिरहेका र अवसरको दृष्टिले सम्पन्नताको शिखरमा बस्ने मानिसहरूबाट होइन, सामान्य मानिसबाटै पार्टी र देशको नेतृत्व हुन सक्छ भन्ने सन्देश म कांग्रेस सभापति पदको उम्मेदवार बनेर दिन चाहन्छु।
र, नेपालमा रहनु भएका मात्रै होइन, विश्वभर रहेका नेपाली लोकतन्त्रवादीहरूको म नेतृत्व गर्न सक्छु।
शक्ति सञ्चयका लागि पहिले सभापति पदको आकाङ्क्षी हुने, पछि उम्मेदवारीसम्म दिने अनि केही महत्वपूर्ण पदमा रहेर निर्वाचन लड्ने नजीर पनि छ। तपाईंको सभापति पदको आकाङ्क्षा त्यस्तो त होइन?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। आफ्नो लागि र आफ्नो नातेदारको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नका लागि कसैले सभापति पदमा दावेदारी गर्नु हुँदैन।
यो देशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने आम जनताको चाहना छ। त्यसैले देशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नका निम्ति अझ बढी लोकप्रिय हुन आवश्यक छ। अझ बढी जनताको भरोसाको पार्टी हुन आवश्यक छ। अझ बढी विश्वास जित्न आवश्यक छ।
र, कुनै पनि पदको उम्मेदवारी दावी गर्दा जुन पदको उम्मेदवारी दावी गरिएको हो, त्यसमा उम्मेदवारी दिनुपर्यो। ‘बार्गेनिङ’ गरेर शक्ति निर्माणका लागि कसैले दावेदारी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यो मेरो स्पष्ट मान्यता हो। त्यसैले म दोहोर्याउनु चाहन्छु–म कल्याणकुमार गुरुङ, नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ र उक्त पदमा उम्मेदवारी दिन्छु।
सभापति पदको उम्मेदवार हुने नै भए तपाईंको राजनीतिक एजेण्डा चाहिँ के त?
मेरो एजेण्डा परिवर्तनको एजेण्डा हो। आम नेपाली कांग्रेसप्रति विश्वास राख्ने, शुभेच्छा राख्ने र लोकतन्त्रप्रति बफादार नागरिकले यो देशमा परिवर्तन खोजेका छन्। देशको शासनसत्तामा परिवर्तन खोजेका छन्। यो देशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने आम जनताको चाहना छ। त्यसैले देशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नका निम्ति अझ बढी लोकप्रिय हुन आवश्यक छ। अझ बढी जनताको भरोसाको पार्टी हुन आवश्यक छ। अझ बढी विश्वास जित्न आवश्यक छ। यसकारण, कांग्रेसलाई सबैको विश्वास र भरोसाको पार्टी बनाउनसँगै आम जनताले माया गर्ने पार्टी बनाउने मेरो एजेण्डा हो।
तपाईंको उम्मेदवारी चाहिँ संस्थापन कि संस्थापनइतर वा स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ ?
मैले अघि नै भनें, एउटा सामान्य मानिसले अब मुलुकको र संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको छ। अबको नेतृत्व संगठन र देशको सामान्य मानिसले गर्ने गर्छ। देशलाई समृद्ध बनाउँछ। पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले हिजोको परम्परागत समूहहरू अब आउने १४ औं महाधिवेशनमा रहँदैनन्। नयाँ राजनीतिक परिस्थिति पार्टीमा निर्माण हुन्छ र म आफ्नै प्यानल बनाएर केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छु। मेरो आफ्नै प्यानल हुन्छ। मेरो आफ्नै एजेण्डा हुन्छ। आफ्नै कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसरी म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीचमा जान्छु। केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छु।
एकातिर महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा अर्कातिर कोभिड महामारीको प्रभाव अझै छ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग कसरी जोडिँदै हो तपाईं?
मैले मिडियामा अन्तर्वार्तामार्फत् भन्दै आएको छु। टेलिफोन कुराकानीमा भन्दै आएको छु। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् राखेको छु। यसरी सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणाको कुरा गर्दा देशभरका साथीहरूदेखि विदेशस्थित पार्टीको जनसम्पर्क मञ्चका साथीहरूले मेरो बारेमा लेखेर आफ्ना धारणा राखिरहनु भएको छ। र, म १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उठ्ने भएपछि साथीहरूले आफ्नै तरिकाले प्रचारप्रसार पनि गर्दै आउनु भएको छ।
अहिले सभापति पदको दावेदारीबाट पछाडि सर्नुहोस् भन्ने त सुझाव आएको छैन नि तपाईंलाई।
मलाई सुझावको खाँचो छैन। त्यस्तो सुझाव चाहिँदैन पनि। म दृढ संकल्पित भइसकेको छु, म केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छु। किनकि, नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउनु छ। यो देशलाई सुशासनको आवश्यकता छ। सुशासन चाहिएको छ। त्यसैले मैले देश र संगठनलाई नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। यथास्थितिमा परिवर्तन सम्भव छैन। यसमा परिवर्तन आवश्यक छ र परिवर्तनको प्रारम्भ गर्न मेरो सभापति पदमा उम्मेदवार हो।
युवा नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने चर्चा चलेको कांग्रेसमा थुप्रै भयो। तर, किन पुग्न सकिरहेका छैनन्?
युवा नेतृत्व लिन डराउँछन्। ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न रुचाउँछन्। युवाहरू अवसरको खोजिमा हुन्छन्। त्यसैले युवाहरू पार्टी नेतृत्वमा पुग्न परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ, वकालत गर्नुपर्छ। जुन युवाहरू पार्टी नेतृत्वमा पुग्न संघर्ष गर्छन्, ती चाहिँ युवा नेता हुन्। अरु होइनन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २३, २०७८, ०७:४४:००
बुधबार, असार २३, २०७८ किन निम्तियो विनाशको बाटो ?